Wararka - Falanqaynta iyo xaalada xaalada suuqa iibka fiilooyinka otomaatiga ee dibada 2021
Suuqa qalabka baabuurta waa weyn yahay, qiimeyntiisa suuqa adduunka wuxuu gaaray 378 bilyan oo doolarka Mareykanka, iyadoo kororka sanadlaha uu yahay 4%.
Dhammaan noocyada qaybaha baabuurta, oo ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan waa qaybo gawaarida la beddeli karo. Sababtoo ah baabuurtu waxay xirtaan oo ay jeexjeexaan isticmaalka dabiiciga ah, waxaa jira baahi weyn oo loo qabo alaabooyinkan suuqa:
—— Qaybaha dayactirka sida miirayaasha, biriiga, taayirada, hakinta, iwm.
—— Qaybaha korantada sida nalka, mootooyinka bilowga, beddelayaal, matoorrada shidaalka iyo irbadaha
—— Burushka, matoorrada korantada, gawaarida gawaarida, xakamaynta hubka, iskuxirka kubbadda, xiriiriyeyaasha xasilinta iyo qaybaha kale ee ganaaxyada, qaybaha caagga iyo qaybaha farsamada
—— Qalabyada xiiqda iyo gacmaha albaabka iyo alaabada kale ee loo isticmaalo gudaha iyo dibedda gaariga.
Warshadaha gawaarida waa warshad caalami ah lafteeda, iyo noocyo badan oo gawaarida lagu iibiyo wax ka badan hal dal ama gobol. In kasta oo nooc kasta iyo nooc kastaa ku yeelan karaan magac kale dalal iyo gobollo kala duwan, gudaha iyo mishiinku sidoo kale way kala duwanaan doonaan. Laakiin guud ahaan, qaybo badan ayaa si aad ah isula jaan qaada oo loola qabsan karaa baabuurta dalal iyo gobollo kala duwan.
Si kastaba ha noqotee, guud ahaan marka la hadlayo, shabakadda ganacsadaha ee bixisa qaybaha gawaarida badanaa waa mid u gaar ah waddan kasta iyo gobol kasta, taas oo horseedi karta kala duwanaanshaha qiimaha weyn ee iibka xudduudaha ee qaybaha baabuurta. Si kastaba ha noqotee, qiimo jaban ama adag in la helo qaybo iyo qaybo ka mid ah macaamiisha dibedda ayaa leh baahi xoog leh oo loogu talagalay qaybaha baabuurta. Suuqa qeybaha waxqabadka sare ee Bariga Dhexe "waxaa ka buuxa firfircoonaan", iyo suuqyada Bariga Yurub, Ruushka, Austra.